Mepụta ndepụta ndepụta maka ịre ahịa Email | Martech Zone
O doro anya na ịre ahịa email nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji rute ndị ahịa. O nwere nkezi ROI nke 3800 percent. O doro anya na ụdị ahịa a nwere nsogbu ya. Ndị azụmahịa ga-ebu ụzọ dọta ndị debanyere aha ha nwere ohere ịtụgharị. Mgbe ahụ, enwere ọrụ nke ibe na ịhazi ndetu aha ndị ahụ. N'ikpeazụ, iji mee ka mgbalị ndị ahụ baa uru, a ga-ahazi mkpọsa email iji lekwasị ndị mmadụ anya na ọdịnaya dị mma n'oge kwesịrị ekwesị.
Nwere ike imeri nsogbu ndị a, mepụta ma jikwaa listi email, ma jiri ha mee ihe na mkpọsa gị. N'okpuru, anyị ga-agabiga na teknụzụ dị iche iche eji anakọta, kwenye, ma hazie ndepụta nzipu ozi. Anyị ga-atụlekwa ọrụ nke opt-ins. Mgbe nke ahụ gasị, anyị ga-agafe usoro maka nkewa ndepụta, ma gafere ndụmọdụ maka imepụta email na akwụkwọ akụkọ na-akpali mgbanwe.
Teknụzụ Email Marketing
Won't gaghị agabiga oke mbọ gị ịnakọta ma jikwaa listi email gị tupu ị mata na azịza email ọkọlọtọ ị na-eji maka nkwukọrịta ụbọchị ga-adabara ahịa ahịa email. Ichoro ihe omuma a raara nye maka nchikota email, nkwenye, nkewa, na ijikwa opt-ins. Ọ dabara nke ọma, ị nwere ọtụtụ nhọrọ dịịrị gị.
Ka anyị bido ụfọdụ ngwaọrụ maka ịdọta ndị debanyere aha. Nwere ike ịgbakwunye na ndenye aha email gị site na isi mmalite dị iche iche, na-eji ọtụtụ usoro. Nwere ike ịgbakwunye ụdị ndebanye aha na ebe nrụọrụ weebụ gị, mepụta ibe ọdịda maka nzube nke ịnakọta adreesị email, rata ndị debanyere aha na asọmpi ma ọ bụ onyinye pụrụ iche, ọbụlagodi ịnakọta ozi ịntanetị na mmemme. Ndị ahụ bụ nhọrọ ole na ole. Ngwa ndị a nwere ike inyere gị aka ị nweta ndị ọzọ nwere mmasị.
Wepụ ebumnuche popups na-enye gị ohere ikpeazụ iji kpokọta ozi kọntaktị email. Mmapụta ndị a dị ka ndị ahịa na-apụ na weebụsaịtị gị ma ọ bụ ibe ọdịda, ma gbaa ndị ahịa ume ka ha kwaga n'ihu na ntaneti site na ịdebanye aha email gị. Nke a bụ nnukwu ihe ọzọ maka ndị mmadụ nwere ike ọ gaghị adị njikere ịgbanwe naanị, mana ka nwere mmasị.
Ndepụta bụ ihe na-arụ ọrụ karịsịa maka nzube a. Ngwaọrụ a na - eme ka usoro ịchịkọta ndebanye aha rụọ ọrụ site na iji ‘wiil’. Kama ịjụ maka adreesị ozi-e n'oge ikpeazụ, ị mepụtara wheel maka ndị ọbịa ka ha wee na-atụgharị iji nweta ego, ngwaahịa, ma ọ bụ onyinye ndị ọzọ. Na nzaghachi maka ịnakọta ihe nrite ha, ha na-enye gị adreesị ozi-e.
Debanye aha Ebe ọ bụla
Nzukọ, nzukọ ọmụmụ, na ihe omume ndị ọzọ na-enye gị ohere zuru oke iji gakwuru ndị ahịa. A sị ka e kwuwe, ha egosila na ọ dịkarịa ala mmasị dị mkpa n'ebe ị nọ site n'igosipụta. O bu ihe nwute, ufodu uzo ndi a na-achikota ihe omuma bu ihe kachasi nma. Nwere ike ịtọpụta obere vidiyo na-arịọ maka akara aka, mana nke ahụ bụ eziokwu. You'll ga-edegharị ihe ndị ahụ niile ma emechaa. Tọlite ​​ebe ọrụ na ịbanye na ozi ndị na-edebanye aha gị n'onwe gị na-akụda mmụọ, ọ na-emekwa ka ị na-arụ ọrụ 'isi ala' mgbe ị kwesịrị ị na-ekwu maka azụmahịa gị. Mgbe ahụ enwere okwu gbasara njikọ ịntanetị na-enweghị ntụpọ nke yiri ka ọ ga-emetụta ihe omume ndị a.
Tụlee Debanye aha Ebe ọ bụla kama. Ngwaọrụ a na - enye gị ohere idebe fọm email, ma bipụta ha na mbadamba, ekwentị mkpanaaka, na laptọọpụ. Ha na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-enweghị Wi-Fi, enwere ike ịbubata ya mgbe ịlaghachi n'ọfịs. Nanị mepụta mpempe akwụkwọ gị, tinye ya na ngwaọrụ dị mfe iji wee hapụ ha ebe ị ga-ahapụ obere akwụkwọ ma ọ bụ ederede. Ndị bịaranụ nwere ike ịhapụ ozi kọntaktị ha, ịnwere ike itinye ya na ndepụta gị ma emechaa.
Mgbakwunye Mgbasa ozi Facebook
Ndị a bụ Mgbasa ozi Facebook ezubere iji nyere gị aka ịnakọta ozi ndị ahịa. Kama iji aka tinye ozi, ndị ahịa chọrọ ka a kpọtụrụ ha naanị pịa mgbasa ozi ahụ, facebook na-eweta ụdị ahụ na ozi ịkpọtụrụ site na profaịlụ ha adịlarị.
Agbanyeghị ị na-anakọta adreesị email, nzọụkwụ ọzọ bụ ịchekwa ha ma kee ha ụzọ n'ụzọ na-enyere aka n'ịgbalị ahịa gị. Ọ bụrụ na ndepụta email gị dị na otu narị otu narị, ma ọ bụ ọbụna puku kwuru puku ọ bụghị ihe ịchọrọ iji aka gị. Kama, ka teknụzụ nyere aka, ma lekwasị anya na ịmepụta atụmatụ nkewa maka gị. Emailfọdụ email ngalaba na-agụnye:
Ihe Ntinye Ọhụrụ - Maka ịnabata ozi ịntanetị na oge ndị ahịa na-enye.
Mmasị na Mmasị Ndị Ahịa - Soro ndị debanyere aha ha na ọdịnaya metụtara ọdịmma na mmasị ha kwuru.
Ịzụ History - Curate email ọdịnaya dabere na ihe ndị ahịa na mbụ zụrụ.
Carzụ ahịa hapụ - Zipu onyinye na ncheta pụrụ iche nye ndị ahịa hapụrụ usoro ndenye ọpụpụ n'oge.
Ngwá isi - Nanị ndị na - azụ ahịa ka ị nwee ike ịchọta ha site na ozi ịntanetị dabere na ndọta magnet dugara ha ịdenye aha na mbụ.
Ndị a bụ ụfọdụ ngwaọrụ nwere ike inyere aka:
Nke a bụ ngwa mgbasa ozi email na-ewu ewu nke na-enye gị ohere ibubata adreesị email site na isi mmalite dị iche iche. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi ihe ndị a dịka otu. Emechaa, mgbe ị mepụtara mkpọsa ahịa email, ịnwere ike iji ya Ngwaọrụ kọntaktị nke ndị na-aga n'ihu iji kpoo ndi mmadu ziri ezi.
Mailchimp bụ ọrụ zuru oke, ngwa ọrụ mgbasa ozi email. Ọ bụ ihe kwesịrị ewu ewu, ma kwesịkwa ịtụle. N'ebe a, anyị ga-eleba anya na modul nkewapụta ngwa ọrụ.
Mailchimp na-enye gị ohere iji aka gị tinye ozi ndenye aha, ma ọ bụ mbubata ya. Ka ịgbakwunye ndị debanyere aha, ị na-enwe ike itinye na mkpado na-anọgide na-akpakọrịta na onye ọ bụla ahịa. Nwere ike mgbe ahụ na-ebuli ndị email anatara site nkewa. Mgbe ị mepụtara mkpọsa, ịnwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ mepụta ngalaba nke ị ga-eji zube ndị ahịa ziri ezi. Nke a bụ ebe mkpado ahụ bakwara uru, ebe enwere ike iji nke a dịka agba.
Ọ bụghị naanị na ọ na - eme gị nsogbu iji zube ndị nwere ọdịnaya email na - enweghị mmasị, GDPR na iwu ndị ọzọ na - egosi na ị nwere ike ịnọ na mmiri ọkụ ma ọ bụrụ na ị na - eji ozi kọntaktị ndị ahịa n’ụzọ ọ bụla nke ha na - enyeghị gị kwupụta. ikike. N'ezie, ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị edepụtara n'elu nwere usoro iji hụ na ndị debanyere aha ha abanyela nke ọma. Inweta ikikere kwesịrị ekwesị dị oke mkpa, usoro ịpụ na-aga-abụ nke impeccable. Lee ụfọdụ usoro kacha mma:
Jiri njiri abụọ abụọ iji hụ na ị na-eche naanị ndị nwere mmasị n'ezie.
Zere ịhọrọ ndị mmadụ na akpaghị aka.
Nye otu nhọrọ wepu aha na mfe ịchọta na ojiji.
Jiri Captcha iji gbochie ntinye aha bot
Kwughachi kpọmkwem ihe ndị debanyere aha na-ịbanye na mgbe ị na-eziga nkwenye ozi ịntanetị
Depụta Usoro nkewa
Mepụta ngalaba email nke na-enweta nsonaazụ bụ ọrụ siri ike. Agbanyeghị, ka ị na-ahụ mkpụrụ nke mbọ ndị ahụ, ọ ga - apụta ìhè na imepụta atụmatụ nkewapụta ndepụta ndepụta bara uru oge na ego ị tinyere.
Cory Neal, COO nke Okwu Okwu
Otu n'ime nsogbu nke ozi ịntanetị na-achịkọta ozi ịchọrọ. Iji nweta ndenye aha, otu n'ime usoro kachasị dị irè bụ ịchọ ka ndị ahịa nye obere ozi. Nke ahụ na - enyere aka ịbawanye ọnụego ndenye aha, mana nwere ike ịhapụ gị obere ozi iji jiri maka ebumnuche ezubere iche. Ndị a bụ ụzọ ole na ole ị nwere ike isi mee ka ọnụọgụ data ị nwere maka ndị debanyere aha gị.
Anakọta ozi site nyocha, ule, na anwale.
Jiri usoro ntinye aka nke email ka ị mata ndị na-adịghị arụ ọrụ, na-arụsi ọrụ ike, na ndị debanyere aha ha nke ọma.
Jikọọ ozi ndenye aha na ịzụrụ ihe gara aga
Jikota ozi nkwado ndị ahịa na ozi ndenye aha email
Nzọụkwụ ọzọ na-akọwapụta ngalaba ịchọrọ iji, yana ịchọpụta ndị debanyere aha iji tinye na ngalaba nke ọ bụla. Anyị kwuru ọtụtụ n'elu. Enwekwara nkewa ọnọdụ, data igwe mmadụ, ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ na ọdịmma. I nwekwara ike nkewa dabere na mgbanwe n'omume ndị ahịa. Enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịtụle.
Mepụta Email na Akwụkwọ Akụkọ Ọdịnaya nke Na-atọghata
Iji mee ka email ị na-eme iji nweta ihe ịga nke ọma, ị ga-eme ka ndị na-ege gị ntị nwee ọdịnaya dị ha mkpa, na-ebugharị ha na ala ahụ, ma na-ewulite echiche nke ntụkwasị obi na akara gị. Segmenting gị anatara nke mere na i nwere ike nwaa gị ozi ịntanetị n'ụzọ dị irè bụ nanị nzọụkwụ mbụ. Lee ụfọdụ ihe ndị ọzọ ị ga-atụle.
Jiri ozi ịntanetị dị omimi iji hazie ọdịnaya - Na ike ọdịnaya, ozi ịntanetị gị nwere koodu HTML nke na-agbanwe ọdịnaya nke email ahụ dabere na onye nnata. Site na teknụzụ a, onyinye, akụkọ, na oku iji mee ka onye ọ bụla natara na-adabere na njirimara na omume ha.
Jiri Isi Okwu na Isiokwu Dị Iche Iche Na-egosi Uru Ha Na-aba - Inweta ndị mmadụ ka ị pịa email gị bụ ihe ịma aka. Mgbe ha pịa, ị ka nwere ọrụ ị ga-arụ. Still ka ga-akpali ndị nnata itinye aka na ọdịnaya gị ma gụkwuo. Iji mee nke a, ree akụkọ ọ bụla site na iji isi okwu ma ọ bụ obere isiokwu na-egosi n'ụzọ doro anya uru nke itinyekwu na ya. Iji maa atụ, '10 Ndụmọdụ Maka Ilekọta DVD Nchịkọta Gị 'anaghị ekwupụta uru n'ezie. '10 Ndụmọdụ Maka Increbawanye Uru Nreghachi nke Nchịkọta DVD Gị '.
Tinye oku oku iji mee ihe na-agụ ndị na-agụ akwụkwọ na-arụ ọrụ - Oku ime ihe abụghị naanị maka ihu ọdịda. Maka ọdịnaya ọ bụla ị kesara, ekwesịrị inwe ụfọdụ ihe onye ọrụ ga-eme. Maka ọdịnaya dị elu, nke a nwere ike ịpị iji lee vidiyo ndị ọzọ ma ọ bụ gụọ ọkwa dị mkpa. Maka ndị na-ere ọfịs dị ala, CTA nwere ike iduga ha na peeji nke ọdịda iji rịọ maka ọnụahịa ma ọ bụ nnwale efu.
Mepụta ma dozie ọdịnaya dị ugbu a na mkpa - Ndị mmadụ na-ejikarị ọdịnaya akwụkwọ ozi email maka ebumnuche nkwado naanị. Nke a bụ nnukwu ndudue dị ka iji blọọgụ gị ma ọ bụ usoro ntanetị mgbasa ozi ndị ọzọ maka nkwalite naanị. Onweghi onye choro itinye aka na akara nke na ekwu maka onwe ya. Kama, dobe obere nkwado nke ọdịnaya nkwado na ọdịnaya nke na-akụzi, na-eme ka a mata ma na-atọ ụtọ. Offọdụ n'ime ihe ndị a metụtara ngwaahịa na ọrụ gị, ịmaatụ: otu afọ ojuju. I nwekwara ike iji ngwaọrụ dika BuzzSumo iji chọpụta isiokwu ndị na-ewu ewu na niche gị, ma ọ bụ ndị na-achịkọta nchịkọta akụkọ dịka AllTop iji chọpụta isiokwu dị ọkụ na-amasị ndị na-ege ntị.
Ọganiihu nke email gị gbadoro ụkwụ na ike ịnakọta ma jikwaa data email, wee zube ndị na-ege gị ntị na ọdịnaya ziri ezi. Site n'iji usoro a mee ihe, ị nwere ike hụ na mbọ gị na-aga nke ọma.
Tags: Kpọtụrụ na mgbe niilemailchimp
Pauline Farris kwuru
Pauline na-asụ Portuguese, English, Spanish na Italian. Ọ gara ụwa iji mikpuo onwe ya na ọdịbendị ọhụrụ na ịmụ asụsụ. Taa obi dị ya ụtọ ịbụ onye otu ịtụ vootu n’otu American Translators Association na onye n’emere isonye na Council Leadership nke ngalaba Asụsụ Portuguese.